Kheyre oo gooni gooni ula kulmaaya wasiirada cusub (Maxaa soo kordhay?) - Caasimada Online
Home Warar Kheyre oo gooni gooni ula kulmaaya wasiirada cusub (Maxaa soo kordhay?)
Kheyre oo gooni gooni ula kulmaaya wasiirada cusub (Maxaa soo kordhay?)
Muqdisho (Caasimada Online) – Wararka naga soo gaaraya Xarunta Villa Somalia ayaa sheegaya in Ra’isul wasaaraha Xukuumada Somalia Xasan Kheyre uu goordhow bilaabay in kullamo gaar gaar ah la qaato Golaha Wasiirada.
Wararku waxa ay sheegayaan in kullanka gaar gaarka ah uu ku saabsan yahay xog is weydaarsiga howlaha shaqo ee horyaal Wasaarada iyo Hanaanka lagula xisaabtami doono Wasiir waliba.
Kheyre ayaa lasoo warinayaa in Wasiirada uu ka saxiixaayo feylal kala ceyn ah kuwaa oo loo gudbinaayo Xafiiska Ra’isul wasaaraha.
Feylalsha uu Kheyre ka buuxinaayo Wasiirada uu sida gooni goonida ah ula kulmaayo ayaa ka duwan Feylalkii hore, waxaana lasoo sheegayaa in Feylalkaani ay yihiin kuwo Khaas u ah Madaxweynaha Somalia, isla markaana uu isaga lahaa dalabkeeda.
Sidoo kale, kullamada uu Kheyre la qaadanaayo Wasiirada ayaa waxaa Wasiir waliba loogu xaqiijinayaa wakhtiga uu la wareegaayo xilka, waxaana soo baxaaya in maalmo kala duwan laga dhigay munaasabadaha xil wareejinta.
Si kastaba ha ahaatee, Ra’isul wasaare Kheyre ayaa dadaal ugu jira sida ay Xukuumadiisa uga badbaadi laheyd Musuq iyo Eedeymo kaga imaada dhanka Shacabka.